Umshini wokuhlanza umshini waseChina ohlanzekile we-Middle Low Consistency Cleaner Pulp Acashile ifektri kanye nabaphakeli | YUNFENG
I-Cleaner Paper Recycling Machine Umshini Ohlanzekile Wokuphakama Okuphakathi Okuphansi
I-Middle Consistency Cleaner ingenye yemishini esezingeni eliphakeme yemishini yokuhlanza, ikakhulukazi iphepha lokuhlanzwa elingcono, imfucuza yephepha yokuphinda isebenze ibaluleke kakhulu. Izinsizakusebenza ezisebenzisa "ijubane lomnenke" zibe uginindela, zixazulule ngokuphelele isilayidi sokuhlanza i-Cleaner singene ezinkingeni ze-slurry jet stream, i-slag iqinisekisa ukusebenza okuhle, kepha futhi inciphisa ukulahleka kwengcindezi. I-Middle Consistency Cleaner isebenzisa okubanzi, zombili izingqinamba eziphakeme zokuguquguquka zihlanze ngaphambi kwe-machi ...
I-Middle Consistency Cleaner ingenye yemishini esezingeni eliphakeme yemishini yokuhlanza, ikakhulukazi iphepha lokuhlanzwa elingcono, imfucuza yephepha yokuphinda isebenze ibaluleke kakhulu. Izinsizakusebenza ezisebenzisa "ijubane lomnenke" zibe uginindela, zixazulule ngokuphelele i-Cleaner Cleaner slurry ekungeneleleni kokuphazamiseka kwe-jet stream, i-slag iqinisekisa ukusebenza okuhle, kepha futhi inciphisa ukulahleka kwengcindezi.
I-Middle Consistency Cleaner isebenzisa ububanzi, zombili izingqinamba eziphakemeyo zokuhlanzwa zihlanzwe ngaphambi kokuba umshini ungasetshenziselwa ukukhethwa kokuhlanzwa koginindela obuphansi.
Umshini wokuhlanza uginindela usetshenziselwa ukususa ukungcola okusindayo okufana nensimbi, isipikili sencwadi, umlotha, isihlabathi kanye nengilazi ephukile njll. Kunganciphisa ukugqokwa kwemishini elandelayo futhi kuthuthukise ikhwalithi ye-fiber. Kuyinsimbi esemqoka yokusetshenziswa kabusha kwephepha lemfucuza, ukusetshenziswa kwayo kwefayibha kanye nenani lokungcola, nokwenza ukungcola okusindayo kwehlukaniswe noginindela, kufezekise inhloso yokuhlanza uginindela.
kusetshenziselwe ukususa zonke izinhlobo zokungcola okusindayo ephepheni, okufana nokudla okuyisisekelo, itshe, izibuko, njll.
Igumbi lokungena kwegagasi lomthamo
Amandla we-eddy aqinile
Indawo esobala esezingeni eliphansi subarea
Lokhu kwenza ukwamukelwa nokungcola kwehlukane kahle.
Gqoka ukumelana nesigaxa se-ceramics, impilo ende yokusebenza.
Isigaxa eside esenzelwe ngokukhethekile sine-taper angle encane nokusebenza kahle kokuhlanza.
Izinsiza kusebenza ezinekhabhinethi yokulawula i-PLC, elula futhi elula ukuyilawula, ikhipha ukungcola okwanele.
Ukukhishwa kwe-slag okuzenzakalelayo okungapheli
Ukuqhutshwa okuqhubekayo kwe-slag evulekile.
I-HT uchungechunge oluphakeme lokuqina kokuqina ingaqeda ukungcola okusindayo okukhudlwana kuno-3mm ububanzi kusuka esitokisini sephepha esenziwe kabusha.
Njengemishini yokuhlola indawo, imvamisa iyisetshenziswa esisehla se-hydrapulper. Ingafakwa futhi njengemishini ebalulekile
ukuqinisekisa ukusebenza kwemishini yokucubungula phansi.
Langaphambilini I-350 Pulp Yokuhlanza Imishini Yokusebenzisa Kabusha Iphepha
Olandelayo: Insimbi engenasici 304 isibalo esiphakeme sokuhlanza iphepha lokugaya iphepha eliphakeme lenza umshini wentengo